Inkonzo kunye noLawulo loMgangatho
1. Khetha iimveliso ezifanelekileyo zomenzi othembekileyo kunye nentsebenziswano elungileyo ezinzileyo.
2. Qulunqa “ULUHLU LOKUTSHEKISHA” ukujonga izinto zomatshini ngokweemfuno zomthengi ze-odolo nganye (ingakumbi i-arhente yendawo edwelisa ngakumbi ngemarike yendawo yakhe).
3. Usuphavayiza womgangatho owabelweyo uya kukhangela zonke izinto ezidweliswe kwi-'EUREKA IKHADI'ukususela kwi-configuration ehambelanayo, imbonakalo, iziphumo zovavanyo, iphakheji kunye nokunye phambi kokuba ileyibhile ye-Eureka ibekwe kumatshini.
4. Ukuhanjiswa kwangexesha ngokwekhontrakthi kunye nokulandelwa kwemveliso ngamaxesha athile.
5. Uluhlu lwecandelo lilungiselelo lomthengi ngokubhekiselele kwisivumelwano sokubambisana okanye amava angaphambili ukuze aqinisekise ukugcinwa kwexesha emva kwenkonzo yokuthengisa kubasebenzisi bokugqibela (i-arhente yendawo icetyiswa ngokukodwa).Ngexesha lesiqinisekiso, ukuba iindawo ezaphukileyo azikho kwisitokhwe se-arhente, u-Eureka uya kuthembisa ukuhambisa iinxalenye phakathi kweentsuku ezi-5 ezininzi.
6. Iinjineli ziya kuthunyelwa ngexesha lofakelo kunye neshedyuli ecwangcisiweyo kunye ne-visa eyenziwa ngathi ukuba kuyimfuneko.
7. Ilungelo lomenzeli okhethekileyo liya kugunyaziswa sisivumelwano sesithathu phakathi kwe-EUREKA, umenzi kunye naye ukuba aqinisekise isiqinisekiso sokuthengisa eyedwa kumenzeli ophuculweyo wasekhaya ozalisekisa imiqulu ecwangcisiweyo ngexesha elimiselweyo elidweliswe kwisivumelwano searhente yangaphambili.Ngeli xesha, i-Eureka iya kudlala indima ebaluleke kakhulu ekongameleni nasekukhuseleni isiqinisekiso sokuthengisa sodwa searhente.